Christiane Taubira သည်ကျွန်စနစ်၏ပထမဆုံးသားကောင်ဖြစ်သော Afrikhepri Fondation အတွက်လျော်ကြေးတောင်းခံသည်
Christiane Taubira သည်ကျွန်စနစ်၏ပထမဆုံးသောပြည်ပဌာနများအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်
Eစီးပွားရေးပညာရှင်၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်၊ ကာရစ်ဘီယံအဖွဲ့ချုပ်၏ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟောင်းနှင့်ပါလီမန်အမတ် Christiane Taubira ကကျွန်စနစ်နှင့်လူကုန်ကူးမှုကိုလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်သည့်ရာဇ ၀ တ်မှုအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်း ၁၉၉၉ တွင်အဆိုပြုခဲ့သည်။ ဤတောင်းဆိုမှုသည်ကျွန်စနစ်ဖျက်သိမ်းပြီးနှစ်ပေါင်း ၁၅၀ အကြာတွင်ပြင်သစ်နှင့်ယခင်ကိုလိုနီများအကြားရှိဆက်ဆံရေးသမိုင်းတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ပ်နှင့်လူကုန်ကူးမှု၏ပထမဆုံးသောပြည်ပဌာနများအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလျော်ကြေးပေးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကို Christiane Taubira ကတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဒီတောင်းဆိုမှုကိုဥပဒေကော်မတီကပယ်ချခဲ့ပေမယ့်ဥပဒေကြမ်းကိုလက်ရှိလက်ထောက်များကတညီတညွတ်တည်းလက်ခံခဲ့ပါတယ်။
“ […။ ] ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဟာလေ့လာမှုတစ်ခုရဲ့အေးစက်တဲ့အရာမဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုသည်မပြည့်စုံသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရေလောင်းစေသောနက်ရှိုင်းသောအနာကိုပျော့ပြောင်းမလာမီအချိန်အကြာကြီးဆက်လက်တည်ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မီနူးဖော်ပြချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အချို့သောရှုထောင့်များကိုကြားရန်ခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သမိုင်းသည်အတိအကျသိပ္ပံပညာမဟုတ်သောကြောင့်ရှည်လျား။ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအဖြစ်ဆိုး […] ဤအစီရင်ခံစာသည်သမိုင်းစာတမ်းမဟုတ်ပါ။
ဒါဟာ dehumanize ဖို့ဒီဇိုင်း ရောက်. စုံစမ်းပြီသံကြိုး, သံ, ခြေချင်း, ခြေချင်း, လက်ထိတ်ခတ်ခြင်းနှင့်လုံး၏စာရင်းနှင့်အတူတစ်ဦးထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒုစရိုက်ဖြေမျိုးရိုးလိုက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်များကလဲ့စားချေဘို့မဟုတ်သောအရာကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာတစ်ဦးအပေါ်စွဲချက်တင်မဟုတ်ပါဘူး။ အဘယ်သူမျှမတတ်သောတည်ထောင်သူတန်ဖိုးများကိုတရားမမျှတမှုများငြင်းဆန်စာကျွေးသည့်လောကသမ္မတနိုင်ငံ, ရန်နက်ရှိုင်းသောနောင်တများလုပ်ရပ်နှင့်ရိုးရိုးသားသားမေးရန်စဉ်းစားမည်ဟုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာနောင်တအဘို့အတောင်းဆိုချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ရငျးနှီး cutaways ကြိုးနှံခိုင်မာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာ (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ထိခိုက်သို့မဟုတ်ဖိနှိပ်, ဖိနှိပ်ဘာလွှတ်ပေးခြင်း) ကိုတစ်ဦး cathartic လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နေဆဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအစုအဝေးအော်ဟစ်သောအသံကိုထွင်းဖို့ရှိသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာယုံကြည်ခြင်း၏အလုပ်အကိုင်မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သျောလညျးကြှနျုပျတို့သညျတိတ်ဆိတ်, အလုပ်မေ့လျော့ရာဇဝတ်မှုကိုဖော်ပြရန်နှင့်ဤရွံရှာဘွယ်မှအမည်နှင့်အဆင့်အတန်းပေးတဲ့အကြောင်းပြချက်ပြောပြပါ။ ရှေ့ဦးစွာ မှစ. , ကုမ္ပဏီရက်စက်သောအားဖြင့်မှတ်သားခဲ့သည်။ တဆယ်ငါးနှစ်လုံးဝဟေတီကနေသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသူမြို့သားတို့သည် Amerindians ပျောက်ကွယ်သွားဖို့လုံလောက်သောခဲ့ကြသည်။ တဦးတည်း 11 အတွက်အမေရိကတလျှောက်dénombrait 1519 သန်းအတွက်နေစဉ်, သူတို့ကတစ်ဆယ့်ခြောက်ရာစုအကုန်မှာသာ 2,5 သန်းရှိကြ၏။ ဒါဟာလျင်မြန်စွာတရားမျှတခဲ့: ကလူထုအခြေပြုမစ်ရှင်အတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်စိတ်ဝိညာဉ်ခြင်းမရှိဘဲ sentient သတ္တဝါတွေကိုကယ်တင်ခဲ့အချို့၏ရွေးစိတ်ချငှါရှာကြံလေ၏။ ဒါဟာ Ham ဆို၏ထင်ကျိန်စာအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ပေးခဲ့သည်။ [ ... ] လူကုန်ကူးမှုနှင့်ကျွန်စနစ် (နောဧနှင့်သူ၏အမျိုးအနွှယ်၏ဒုတိယသား, ကျိန်ဆဲခဲ့ကြသူအအာဖရိကမှအနက်ရောင်လူများကမျြးစာကိုဘိုးဘေးကိုးကားစရာ) အလွန်အမင်းအကြမ်းဖက်ခဲ့ကြသည်။ summarization တောင်းဆိုကြောင်းအဆိုပါကိန်းဂဏန်းများအစွန်းရောက်ရက်စက်မှုများ၏ဖြစ်ကြသည်။
1978 မှာတော့ပြင်သစ်ကကျင့်သုံးလူကုန်ကူးမှုနှင့်ကျွန်စနစ်တစ်ခုပြည့်စုံစေ့စပ်အကဲဖြတ်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဒါဟာတတိယပါဝါဥရောပကုန်သွယ်မှုအဖြစ်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူမ, milking ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး, ကုန်သွယ်ရေး, လူကုန်ကူး, သာရွေ့လျားကျင့်သုံးရွှေ, ငွေ, နံ့သာဖြစ်ကြသည်။ သူမသည်ကလိုမျိုးတော့ခြင်းနှင့်အခြားများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအောင်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောသို့လူကိုပြောင်းလဲကြောင်းကျွန်စနစ်အတွက်အခြားသူများနှင့်အခြားအပြီးပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအနက်ရောင်ကုဒ် (လူးဝစ် XIV ၏နန်းစံအောက်, Code ကိုကျွန်းများအတွက်ပြင်သစ်ကိုလိုနီများနှင့်အနက်ရောင်ကျေးကျွန်များ၏ဘဝအသက်တာ၌ကျွန်ခံ၏ status အုပ်စိုး, 1685 အတွက်ပြဋ္ဌာန်း။ ဒါဟာ (ဥပဒေရေးရာသဘောတူညီချက်ရေးထိုးခိုင်လုံသော (တစ်ဦးလုပ်ရပ်စေသည်ထောက်ခံ ) နီးပါးရာစုနှစ်နှစ်ခုပြင်သစ်ဥပဒေအရတည်းခိုသော) တြိဂံကုန်သွယ်မှု၏အလေ့အကျင့်သည်ကျွန်ပရိဘောဂတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်လွတ်မြောက်လာကျွန်သူ့ယခင်မာစတာ, မုဆိုးမနှင့်ကလေးများမှတစ်ဦးအနည်းကိန်းလေးစားမှုရှိကြောင်းဖော်ပြထားသည် ပထမဦးဆုံးရေကြောင်းပြသည့်ရီယို de Oro (ဆာဟာရ၏တောင်ပိုင်းစိတျအပိုငျး), 1416 အတွက်ကိပ် Bojador ရောက်ရှိကတည်းက။ ဒါဟာမကြာခင်ဇာတိအမေရိကန်တွေကညှာအတာမဲ့ပြုန်းခံကြသည်ဟုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ကုန်သွယ်ရေး, လေးရာစုနှစ်များစွာကြာမြင့် ကျွန်စနစ်, အလွဲသုံးစားမှု, အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှု, ရောဂါ, အရက်, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အဆိုပြုထားတဲ့သူစစ်ပွဲများ resistor.The ဒိုမီနီကန်ယဇ်ပုရောဟိတ်Bartoloméက de လာ့စ်ဗီး CASA, အေ၏အကြီးအကျယ်တင်သွင်းအကြံပြု frican ပိုမိုကြံ့ခိုင်ဆင်ခြင်၏။
ခုနစ်ဆယ်သန်း, ပြော, လူတွေ, သမိုင်းပညာရှင်, အမျိုးသမီးများ, ကလေးများ, ယောက်ျားများ၏ကျယ်ပြန့်သည်နှင့်အညီ, လူကုန်ကူးမှုနှင့်ကျွန်စနစ်ခံစားခဲ့ရသန်းသုံးဆယ်ရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်တဆယ်ကျနော်တို့အဘို့အဖော်ပြထားသည့်ခန့်မှန်းချက်ကြည်လျှင် ကျွန်အမေရိကတိုက်သို့ရောက်လာသည်ကား, လေးငါးအဆိုပါစီးနင်းမှုအတွင်းသေဆုံးခဲ့သည်, ကမ်းရိုးတန်းဖို့လမ်းအပေါ်, အိမ်များကို Ouidah, ဇန်ဇီဘာနှင့်ကူးကာလအတွင်းခွေ့ slaves ။
တြိဂံရောင်းဝယ်မှုကိုသီးခြားအကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော်၏အကြောင်းပြချက်များဖြစ်စေပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်အများပြည်သူစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်။ ကျွန်စနစ်ကိုပြည်နယ်စိုက်ခင်းများ (စည်းကမ်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် (အများပိုင်ကဏ္ domain ပိုင်ဖြစ်သည့်ပိုင်ခွင့်)) သည်ဓမ္မဆရာများနှင့်ပုဂ္ဂလိကကိုလိုနီများထက် ပိုမို၍ သာယာဝပြောသော (သို့) ကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၁၇၁၆ ခုနှစ်အထိအချိန်ကြာမြင့်စွာလက်ဝါးကြီးအုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများသည်ပုဂ္ဂလိကပဏာမခြေလှမ်းများ (၁၆၄၄ တွင် Colbert တီထွင်ခဲ့သော ၁၆၄၄ ခုနှစ်တွင် Compagnie des indes occidentales)၊ ထို့နောက် Compagnie du Sénégalကိုတည်ထောင်ခြင်းကိုပယ်ချခဲ့သည်။ သို့သော်စိုက်ခင်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၁၇၁၆ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်တွင်မူပိုင်ခွင့်အက္ခရာများ (သင်္ဘောထွက်ခွာခြင်း၏သန့်ရှင်းသောပြည်နယ်၏အရိပ်လက္ခဏာ) သည်စိန့်မာလိုးပြည်နယ်၊ ရူန်းဆိပ်ကမ်းများကိုခွင့်ပြုထားသည်။ La Rochelle, Nantes နှင့် Bordeaux ကျွန်းသားများသို့ခေါ်ဆောင်လာသည့်လူမည်းလူတစ် ဦး လျှင်တစ် ဦး လျှင်ပေါင်နှစ်ဆယ်နှင့်ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုကုန်သွယ်မှုကိုကျင့်သုံးရန်နှင့်သွင်းကုန်ခွန်မှကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန် […] ဤအကြမ်းဖက်မှုနှင့်ဤရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကရှင်းပြရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်၎င်းသည်တိတ်ဆိတ်စွာချဉ်း ကပ်၍ ပြည်သူ့အာဏာပိုင်များနှင့်လူများကိုမေ့သွားစေလိုသောကျွန်များနှင့်မေ့လျော့လိုသောကျွန်မျိုးဆက်များနှင့်ညီညွတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုမျှဝေသည်ကိုသိသည်။ ဈကျွန်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကျွန်စနစ်များကိုပြောရန်၊ ဉာဏ်အလင်းကိုချာ့ချ်၏လွှမ်းမိုးမှုကိုဆန့်ကျင်သောပုန်ကန်မှု၊ လူ့အခွင့်အရေးအတွက်တောင်းဆိုမှု၊ ဒီမိုကရေစီအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တောင်းဆိုခြင်းအားဖြင့်မှတ်သားဖော်ပြခဲ့သည် ဤကာလအတွင်းစိုက်ခင်းစီးပွားရေးသည်အလွန်တိုးတက်ထွန်းကားသောကြောင့်တြိဂံကုန်သွယ်မှုသည် ၁၇၈၃ မှ ၁၇၉၁ အတွင်းအမြင့်ဆုံးသောစည်းချက်ကိုသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူ၏သားစဉ်မြေးဆက်များနှင့်သမီးများအဆက်မပြတ်ပြတ်တောက်နေသောကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလည်းဖြစ်သည်။ Martinique နှင့် Guadeloupe တို့သည်သကြားစီးပွားရေးအပေါ်မူတည်လျှင်၊ ကာကွယ်ထားသောစျေးကွက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဂိုင်ယာနာသည်သဘာ ၀ သယံဇာတများ (အထူးသဖြင့်သစ်နှင့်ရွှေ) ကိုပြန်လည်ထွန်းညှိရန်ဖိအားပေးလျှင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်ဝေးကွာသောကုန်သွယ်မှုသည်ကိုလိုနီသီးသန့်ဖြစ်ခြင်း၏တိုက်ရိုက်ရလဒ်ဖြစ်သည်။ မြေယာဝေမျှခြင်းသည်လည်းမမျှတမှုဖြစ်လျှင်၎င်းသည်အိုးအိမ်အုပ်ချုပ်မှု၏နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ပ်တို့ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကျွန်စနစ်သည်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်သောရာဇ ၀ တ်မှုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောရန်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ […] ပညတ္တိကျမ်း၌ပါရှိသောဤစာတန်း၊ ခိုင်မာသော၊ တိကျသေချာမှုမရှိသောစကားလုံး၊ ဤတရားဝင်နှင့်တည်မြဲသောစကားလုံးသည်သင်္ကေတပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ပ်နှင့်ဆက်နွယ်သောပြည်ပလူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ အထူးသဖြင့်ဖျက်သိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအခြေချနေထိုင်သူများအတွက်လျော်ကြေးပေးခြင်းနှင့်မညီမျှမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့အပြင်အာဖရိကရှိခုခံသူများကရွာသားများအားကိုလိုနီနယ်မြေများအားလုံး၌ခုခံရေးပုံစံများကို ဦး ဆောင်ခဲ့ကြသည့်သရဖူများ (ပျံသန်းနေသောကျေးကျွန်များ) မှထုတ်လွှင့်ခဲ့သောငြင်းဆန်မှုလမ်းကြောင်းကိုအပြည့်အ ၀ အလင်းရောင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပစ်သည့်ကိုယ်ကျင့်တရားပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုလည်းအကြံပြုထားသည်။ နှင့်နိုင်ငံရေးအရရုန်းကန်မှုများနှင့်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များနှင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းဝါဒီများ၏လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်ပြင်သစ်အလုပ်သမားများ။
၎င်းတွင် (ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသည့်ကမ္ပည်းစာ) ဤပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသည်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုအမြစ်မှနုတ်ပစ်ရန်၊ လူမျိုးရေးပtheိပက္ခများ၏ရင်းမြစ်များကိုဖော်ထုတ်ရန်၊ အထူးသဖြင့်မှတ်ဉာဏ်နေရာများပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ […] သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားမှုများ၌အတူတကွလမ်းလျှောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားပါကအရောင်များကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘ ၀ ၌ရှိသည်၊ ဘဝသည်အရောင်များနှင့်ရှိသည်၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပုံစံများသည်၎င်းတို့ရောယှက်နေလျှင် ပို၍ များပြားသော၊ […] Léon Gontran Damas (၁၉၁၂-၁၉၇၈)၊ ဂိုင်ယာနာမှကဗျာဆရာနှင့်ဆိုရှယ်လစ်လက်ထောက်AiméCésaireနှင့်LéopoldSédar Senghor တို့နှင့်အတူ negritude လှုပ်ရှားမှုပူးတွဲတည်ထောင်သူ - LéopoldSédar Senghor - သူ၏နာကြည်းမှုကို“ ငါအမြဲတမ်းအော်ဟစ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ခံစားရတယ် ငါ့ကိုဝန်းရံသောသူနှင့်၊
ဖေဖော်ဝါရီလ 18 1999 အမျိုးသားညီလာခံမှမိန့်ခွန်း
အမျိုးသမီးများ၏အသံ - သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်သားထားသောဤကြီးမားသောမိန့်ခွန်းများ
€ 8 ကနေ 21,50 အသစ်
2 35,17 €ကနေအသုံးပြုခဲ့သည်
€ 21,50 ကိုဝယ်ပါ
နောက်ဆုံးဇွန်လ 12, 2021 4:58 ရက်စွဲပါ
အီဂျစ်လျှို့ဝှက်ချက်များ - အလက်ဇန်းဒါးမိုး (PDF)
စတင်ခရီး - Matthieu Grobli
မိမိကိုယ်ကိုသဘောပေါက်ခြင်း၏အနှစ်သာရ - Paramahansa Yogananda (အသံ)